I-UK ifuna ukuvimbela izingane ekubukeni i-porn online | Izindaba zamagajethi
I-UK isisebenze iminyaka ukuvimbela izingane ekubeni nzima ukuthola i-porn. Ngakho-ke, bebelokhu bethula izinyathelo eminyakeni edlule. Manje, sekuwukujika okusha, okunikeza impela okuningi ongakhuluma ngakho. Bafuna ukuthi uthenge iphasi elikhethekile elithengiswa kuphela kuma-kiosks ukuze ukwazi ukufinyelela kulokhu okuqukethwe.
Iphasi noma ikhadi lokho Bekuzothengiswa ezikhungweni lapho umsebenzisi kufanele azikhombe khona futhi akhombise ukuthi uneminyaka esemthethweni. Ngakho-ke, izingane ngeke zikwazi ukufinyelela kuzo futhi ngenxa yalokho azikwazi ukubuka izithombe ezingcolile. Kuzofanele uzikhombe esitodlaneni ngepasipoti noma ilayisense yokushayela ukufakazela ukuthi ungumuntu omdala.
Kuyisilinganiso esiyingxenye yenhlangano uhulumeni wase-UK ayimemezela eminyakeni embalwa edlule. Njengoba inhloso yakho yilokho abasebenzisi baqinisekisa iminyaka yabo ukuze babuke okuqukethwe kwezocansi. Yize kuyisilinganiso esiyimpikiswano. Ngisho ne-UN ibiphikisana nayo.
Umthetho okwamanje uyabhalwa. Ngakho-ke umqondo wokuthenga lokhu kudlula okunikeza ukufinyelela kumakhasi ewebhu ane-porn yisiphakamiso. Kungahle kungapheli ukwenziwa. Noma kungahle kube nezinguquko kuyo kulezi zinyanga. Kepha umqondo wayo ucace bha.
I-UK ifuna ukuvimbela izingane ukuthi zingakwazi ukufinyelela i-porn ngazo zonke izindleko. Okungaziwa ukuthi ngabe lezi zinyathelo abaziphakamisayo zizoba nomthelela kulokhu. Kukhona nolunye uhlelo oluphakanyisiwe okungukuvulwa kwamakhasi ezocansi uma umsebenzisi efaka imininingwane yekhadi lakhe lesikweletu. Inketho ebeka izingozi ezimbalwa.
Ngaphandle kokungabaza, isilinganiso sizonikeza okuningi okuzokhulunywa ngakho, ngaphezu kwalokho, ukuthi ngokusebenzisa i-VPN enhle noma yimuphi omncane angakwazi ukufinyelela ku-porn Ngendlela elula. Ngakho-ke kungahle kungasizi ngalutho ukwethula umthetho onjengalona. Ucabangani?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ezocansi nezocansi » I-UK ifuna ukuvimbela izingane ekubukeni i-porn online
Akungimangazi, uma kuhlala kukhona abanobuqili abachitha isikhathi ngalezi zinto. Kungcono ukuvumela izingane zijabulele okuthile okufana nobulili okuyingxenye yempilo uqobo.